Guqula iidigri / imizuzu / imizuzwana kwiidesimali-iGeofumed
Guqula degrees / imizuzu / lemizuzwana wokugqibela
NgoFebruwari, 2010 Iiphotography, Ukulanda, Google umhlaba / imephu
Ngethuba elidlulileyo ndicele le nto, kwaye ekubeni umhlobo ubonakala ngathi kancinci kwaye namhlanje unomhla wokubhiyozela izinto ezininzi, nasi isixhobo esikuvumela ukuba uguqulwe ukulungelelaniswa kweendawo, iidridi zibe ziimfuno.
Kutheni ithala lokuguqula
Kuqhelekileyo ukufumana izilungelelaniso ezise-degrees, imizuzu, imizuzwana, umzekelo:
I-N ithetha ukuba kububanzi obungama-75 degrees ngaphezulu kweikhweyitha, ukuba ibino-S oko kuya kuthetha ukuba ikwi-hemisphere esemazantsi. Kwimeko yobude obude, baya kuba no-E okanye u-W, kuxhomekeke ekubeni basempuma okanye entshona ye-Greenwich meridian
Iinkqubo ezinjengeGoogle Earth kunye ne-ArcGIS zifuna ukuba zihambe kwifomati yeshumi, njenge:
I-Latitude, ukuba ibingaphantsi kwe-ikhweyitha, ibiya kuba mbi, kwaye kuya kwenzeka okufanayo ngobude, obuya kuba bubi kwi-hemisphere eseNtshona. Ndikucebisa ukuba uyiqonde, udlale kancinci ngeGoogle Earth, utshintshe ukhetho lwe-UTM, indawo, kunye nangaphandle kweendawo zokugqibela.
Indlela itafile isebenza ngayo ukuguqula izilungelelaniso zeendawo, iidridi eziya kutsho
ngokusebenzisa njalo etafileni Gabriel Ortiz, ngubani lahlala lokuguqula zilungelelanise ethile UTM, sibonakalise umhlathi apho sele format wokugqibela.
Unokukhetha i-spheroid, kwithebhu ephezulu.
Iikholamu ziphuzi, kufuneka zifake idatha, kwikholamu yokuqala yamkela inombolo yesazisi yendawo.
Ngakwesokudla ngamnye ngamnye ububanzi nobude kwifom ye-decimal, ngaphandle kokujikeleza, kunye nesalathisi salo esifanelekileyo xa sihambelana.
Ikholam yelilune iqulethe idatha echanekileyo, kunye nenombolo yendawo, ububanzi kunye nobude.
Kwintloko yale kholamu, ungangena kwinani leendawo zokugqibela esilindele ukuba i-concatenation ijikeleze. Lumka ukuba ii-decimals zokujikeleza indawo ezinokuhanjiswa kungakhokelela kwiimpazamo ezinkulu.
Thumela izilungiso kwi-txt
Ukuyithumela kwifayile ye-txt, vula iifayile entsha, ikopi idatha kwikholomu ye-orange uze uyihlanganise apho.
Emva koko le fayile inokulayishwa ukusuka kwiGoogle Earth, ebonisa umyalelo, onje Ndacacisa kweso sithuba.
Ewe kunjalo, iDatum kufuneka ikwi-WGS84 ukuze bangangeni kwenye indawo. Iikholamu bezisoloko zitshintshela kwi-UTM kwaye ihambelana ne-AutoCAD, njengoko yayinjalo inguqu yokuqala kule tafile.
Ukukhuphela kufuna igalelo lokomfuziselo lokukhuphela, onokuthi ulwenze nge Paypal okanye kwikhadi lekhredithi.
Iibhondi Umhlaba ka-Google Office for ebulalayo
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iminyaka eli-120 yeLizwe yeJografi
Post Next Baphi abasebenzisi be-GIS abaninzi?Okulandelayo »
Iimpendulo ezi-20 "Guqula iidigri / imizuzu / imizuzwana ukuya kwiidesimali"
Ibakala ngalinye linemizuzu ye-60 kunye nemizuzu nganye ye-60 imizuzwana. Kwenzeka ntoni kukuba ngexesha lokumakisha kwimephu okanye kwibala, benziwa kuphela kuwo wonke umgama ukuze bangagcwalisi igridi.
URaúl Navarro uthi:
Sawubona, yintoni ephakanyisiweyo? Mna udidekile intwana encinane kunye naleyo izidanga, imizuzu nemizuzwana ukuba geography Kuthathwa ukuba ngamnye izidanga okuyi 15 elilinganisiweyo kunye nezinga nganye oko kulinganiswa imizuzu 4, njani kunokwenzeka ke ukuba 1 60 umlinganiselo degree imizuzu? okanye lilinganisa i-4 okanye i-60, njani le nto? Ndingathanda ukuba umntu andiphendule
Siyabonga kunye nobuliso
Idigithi ineemizuzu ye-60, kodwa kule meko awunayo imizuzu.
Kodwa kwakhona kwibakala ngalinye linemizuzwana ye-3,600 (imizuzu ye-60 yemizuzwana ye-60). Ke imizuzwana yakho ye-15 ilingana no:
Ke iya kuba zii-75.004166 degrees kwifomathi yedesimali.
Masibeke omnye umzekelo obandakanya amadigri, imizuzu kunye nemizuzwana:
Imizuzu: 14, efana ne-14 / 60 = i-0.23333 degrees
Imizuzwana: 57 / 3600, elilingana nama-0.0158333 degrees.
Ukongezwa kuya kuba yi-75.249166 degrees.
giiseell :) uthi:
Kulungile, akukho nto ndifuna ukuyidlulisa i-75 ° 15 ″ kwixabiso ,, oko kukuthi, kwishumi ,, nceda uncede
Umqondo ongenanto wokulo msebenzi (iidisimari zeDesimenti ukuya kwiiyure, imizuzu kunye nemizuzwana) kule nqaku.
Ndiyabulela idatha, ngokuqinisekileyo umntu uya kukwazi ukuyisebenzisa.
Ndagqiba ekubeni ndithumele ikhowudi:
Umsebenzi weGMS (DegreesDecimal)
g = Int (az): m = Int ((az - g) * 60): s = Ujikeleze (3600 * (az - g - m / 60), 0): Ukuba s> = 60 Emva koko s = 0: m = m + 1
Ukuba m> = 60 Ke m = 0: g = g + 1
Ukuba g> = 360 Ke g = 0
I-GMS = g & «°» & m & «'» & s & «» »
Thumela kwiposi editor@geofumadas.com
kwaye emva kokuyihlolisisa siya ku sasaza.
Ndenze ukungena kwe-Excel ekusebenzeni kwayo ukuguqula i-angle Iimigangatho eziqhelekileyo kwisicatshulwa seSigqibo seNgcaciso sesibini
3.15218 = 3 ° 09'7.85 ″, kodwa andazi ukuba ndiyilayisha njani kwiforum. Umntu undincede nceda.
Andres Humeres uthi:
Ndifuna itafile ukuguqula i-UTM PSAD56 ukuya kwiDegrees, imizuzu edlulileyo
Numa siyabonga kakhulu ngenxa ye-sabia nada kodwa i-graxiias
unombulelo oluninzi! Awazi ukuba ndilahlekile kangakanani i-hahahaha, salingoo !!!!!!!!!
Idilesi ye-1 ineemizuzu ye-60, enye iminithi ye-60 imizuzwana.
Uhlula i-4,750 phakathi kwe-60 ukwazi ukuba mangaphi ama-degrees akhoyo, anika i-79.16
Emva koko, uya kuba ne-1 degree (ngemizuzu ye-60) kunye nemizuzu ye-19 zombini idibanise ii-79.
Xa sidibanisa ukuba ingaphi imizuzwana ekhoyo kwimizuzu engama-79 evaliweyo, singaba no-79 × 60 = 4,740. Oko kuthetha ukuba usalelwe yimizuzwana eyi-10 ukufikelela kwi-4,750
I-1 degree, imizuzu ye-19, imizuzwana ye-10
Ndiyakudinga ukuba nceda undixelele ukulandelelana okuza kulandelwa ukubonisa kwidigri, imizuzu kunye nemizuzwana: imizuzwana engu-4750. Andinayo ingcamango encinane
Ingulube ayifaki i-piggyberry ecocekileyo ekhonza izinto
Epa! Ikhonkco elikhulu. Ndiyabulela, kuninzi ongakubona apho.
Ungasebenzisa «Guqula iFayile yeGPS ibe isicatshulwa okanye i-GPX» kwiwebhusayithi http://www.gpsvisualizer.com kwaye uguqula amaphuzu kwifayile ye-GPX kwaye uyilayishe ku-GE okanye kwi-Global Mapper kwaye uvela apho ufike kwifomethi oyifunayo.
Izibingelelo zaseArgentina kwaye yonke imihla ndiyayibukeza iblogi inomdla kakhulu.